चुनाव लगत्तै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य – www.janabato.com
चुनाव लगत्तै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
२३ मंसिर २०७४, शनिबार ०४:२२ December 9, 2017 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । मंसिर २३–निर्वाचनपछि मतगणनाको मौका छोपेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ। शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, ग्यास र मट्टितेलको मूल्यवृद्धि गरिएको छ।
पेट्रोलको प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ भने डिजेल र मट्टितेलको ३ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ। यस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाइएको छ।
निगमले चुनाव अगाडि नै यससम्बन्धी निर्णय गरेकोमा सरकारले स्थगित गरेको थियो। निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टै मूल्यवृद्धि गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार समायोजन गर्न मूल्यवृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ।
← नेकपाले भन्यो–‘शान्ति प्रक्रिया भङ्ग, क्रान्तिको नेतृत्व हामी गछौं’
अब नेपालमा ८८४ सांसद, ११३ मन्त्री हुने →
भारतमा माओवादीको भीषण आक्रमण, सुरक्षाकर्मी हताहत
२८ कार्तिक २०७५, बुधबार १३:२८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on भारतमा माओवादीको भीषण आक्रमण, सुरक्षाकर्मी हताहत
२० मंसिर २०७५, बिहीबार ०६:०६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on एकीकृत जनक्रान्तिका पाँच आधार